घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू ओलेक्सान्डर जिन्चेन्को बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
अन्तिम अपडेट गरिएको सेप्टेम्बर 27, 2019
एलबीले पूर्ण स्टोरीको एक फुटबल प्रतिभाशाली नाम प्रस्तुत गर्दछ "ओलेक्सी“। हाम्रो ओलेक्सान्डर जिन्चेन्को बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता लिएर आउँदछ।
ओलेक्सान्डर जिन्चेन्को बचपन कहानी- आजको विश्लेषण। डोनेट्स्क र ट्रान्सफर Mkt लाई क्रेडिट
विश्लेषणमा उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रारम्भिक जीवन, शिक्षा / क्यारियर निर्माण, प्रारम्भिक क्यारियर जीवन, प्रख्यात कथाको मार्ग, प्रख्यात कथामा वृद्धि, सम्बन्ध, व्यक्तिगत जीवन र जीवनशैली इत्यादि समावेश छ।
हो, सबैले उहाँलाई पेप गार्डियोलाको बाँया-पछाडि विकल्पको लागि बहुमुखी र आश्रित खेलाडीको रूपमा चिन्छन्। यद्यपि केवल थोरैले ओलेक्सान्डर जिन्चेन्कोको जीवनीलाई ध्यान दिन्छन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
ओलेक्सान्डर जिन्चेन्को बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
ओलेक्सेन्डर जिन्चेन्को डिसेम्बर एक्सएनयूएमएक्सको 15th दिन उनका बुबा वोलोडाइमर जिन्चेन्को र आमा (जसको नाम अज्ञात छ) मा युक्रेनी शहर रडोमिशेलमा जन्म भएको थियो।
ओलेक्सान्डर जिन्चेन्को फादर र आमा
जिन्चेन्को उत्तरी युक्रेनको ऐतिहासिक शहर रडोमिसलमा आफ्ना परिवारका एकमात्र सन्तानको रूपमा हुर्केका थिए। यो एक्लो शहर जुन यसको संग्रहालय र कलाकृतिहरूको लागि आज प्रसिद्ध छ प्रशासनिक केन्द्र थियो होलोकास्ट, युरोपियन यहूदीहरूको दोस्रो विश्वयुद्ध नरसंहार वर्णन गर्न प्रयोग भएको शब्द।
के Radomyshl मा बढ्दै Oleksandr Zinchenko को लागी देखिन्छ
जिन्चेन्को धनी परिवार पृष्ठभूमिबाट हुर्केका थिएनन्। उनका अभिभावक धेरैजसो मानिस जस्ता थिए जसले सामान्य कामहरू गर्छन्, उत्तम वित्तीय शिक्षा थिएन र प्रायः जसो पैसाले स .्घर्ष गर्दछ।
ओलेक्सेंडर जिन्चिनो Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
ओलेक्सान्डरका लागि, उनको सहर शून्यता समाप्त भयो प्रत्येक पटक त्यहाँ उसको खुट्टामा फुटबल थियो। उहाँ बच्चा हुनुहुन्नथ्यो खेलौना को नयाँ संग्रह मा रुचि थियो, तर केवल एक फुटबल र चारै तिर उसको बाल्यकालको सब भन्दा राम्रो साथी भएको।
ओलेक्सान्डर जिन्चेन्को शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
लात हान्ने र फुटबल बलको साथ महान कार्यहरू गर्ने कार्यको साथ उपहार। जिन्चेन्कोले उनको परिवारको बैठक कोठामा फुटबल फुट्न थाल्यो जुन रडोमिसलको क्षेत्रमा प्रवेश भयो। फुटबलमा आत्म-शिक्षा प्रदान गर्दा यसको लाभांश भुक्तान गरियो किनकि भाग्यशाली जिन्चेन्कोलाई स्थानीय शहरको क्लब, कर्पटिया राडोमिशलमा परीक्षणको लागि बोलाइएको थियो।
ओलेक्सेंडर जिन्चिनो Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
ओलेक्सेन्डर जिन्चेन्को खेलको उत्कटताले उनलाई एक्सएनयूएमएक्सको उमेरमा कारप्टिया राडोमिसलमा सम्मिलित भएको देख्यो, जसले उसलाई आफ्नो क्यारियरको जग बसाल्न मञ्च प्रदान गर्थ्यो।
एकेडेमीमा हुँदा, जिन्चेन्कोले उनका सबै साथीलाई युक्रेनका महान फुटबलर आन्द्रे शेभचेन्को र सबैका लागि आइड्री शेभचेन्को पूजा गर्ने फुटबल प्रशंसक देखे। ओलेक युक्रेनमा अन-ट्याप गरिएको प्रतिभाको बारेमा बढी खास थिए। उनी सबै चाहन्थे अर्को शेवा हुन।
जिन्चेन्को कार्पाटिया रडोमिसलसँग एक्सएनयूएमएक्स वर्षसम्म रह्यो र मोनोलीट इलिचिस्कले अर्को युक्रेनी युवा क्लबलाई ठूला प्रतिष्ठानहरूमा पुरानो प्रोजेक्टको रूपमा प्रख्यात भनेर बुझेको थियो। उसले आफ्नो बराबरी बीच बाहिर निस्केको आफ्नो कटिबद्धताको लागि क्लबसँग प्रभाव पार्ने द्रुत थियो। जिन्चेन्को उमेर समूहका माध्यमबाट निर्मल प्रगति भयो, एउटा यस्तो उपलब्धि जसले उनलाई वरिष्ठ फुटबल अवसरको लागि शीर्ष उम्मेदवारमा प्रक्षेपण गर्‍यो।
ओलेक्सेंडर जिन्चिनो Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - सडकको प्रसिद्धि कथा
ओलेक्सान्डरको ड्राईव र दृढ संकल्प उसको सब भन्दा मूल्यवान सम्पत्ति हो। वर्ष एक्सएनयूएमएक्सले उनलाई युक्रेनको सबैभन्दा ठूलो एकेडेमी शाख्तार डोनेट्स्कले हर्काएको देख्यो जसले उनलाई उनको प्रस्ताव स्वीकार्न लोभ्यायो। थोरैलाई थाहा थियो कि उनी क्यारियर नाकाबन्दीमा छिरेका थिए. अब के भयो तपाईलाई नै भन्नुहोस् !!
ओलेक क्लबको वरिष्ठ टोलीमा प्रवेश गर्न महत्वाकांक्षी थिए जो शीर्ष स्टारहरू थिए, फर्नान्डिन्होको मनपर्दो, डगलस कोस्टा, र Henrikh Mkhitaryan। शाख्तारमा, अन्य युवा क्लबहरू ओलेकले खेले जस्तो नभई स्थिति बने धेरै गाह्रो। उसको शब्दहरुमा:
मसँग मेरो करारमा दुई बर्ष बाँकी थियो र तिनीहरूले मलाई भने कि उनीहरूसँग मैले जारी राख्नुपर्दछ तर पहिलो टोलीमा न खेल्न। मेरो सपना पहिलो टीममा खेल्ने थियो।
सरल शब्दमा भन्ने हो भने, क्लबले वरिष्ठ फुटबलमा सफल हुनको लागि उसको मार्ग बल्क गर्यो र प्रभावित अन्य युक्रेनी केटाहरूको लागि त्यहाँ कुनै बाटो थिएन। यो निराशा युवा टीमको कप्तान हुँदा पनि भयो।
ओलेक्सान्डर जिन्चेन्को रोड फेम स्टोरी। डोनेट्स्क-वेमा क्रेडिट
क्लबसम्म उसको लागि पहिलो सम्पर्क टोली एकीकरणको आश्वासन बिना हस्ताक्षर गर्न अर्को सम्पर्क प्रमाणित गर्नसम्म पुगेको थियो। यो एक जबरजस्ती अनुबन्ध प्रस्ताव थियो जो एक खतरा जस्तो आयो। ओलेकको शब्दमा;
उनीहरूले भने यदि मैले हस्ताक्षर गरेन भने म तिनीहरूको लागि खेल्ने छैन, उनीहरूको युवा टोलीका लागि पनि जुन मैले प्रबन्ध गरेको थिएँ। लगभग चार महिनासम्म म निराश भएँ। म प्रत्येक प्रशिक्षण सत्रमा भाग लिएँ तर खेलेन। म आफ्नै निर्वासनमा थिए।
अवस्था बिग्रनको लागि, यूक्रेनी युद्ध सुरु भयो र क्लब संकट मोडमा गयो। त्यस समयमा, ओलेक्सान्डर अझै पनि उसको सम्झौताको अधीनमा थियो। यो युद्धले उनका आमाबुवालाई रूसी शहर उफामा बसाई लग्यो, पारिवारिक निर्णयले ओलेक्सनडरले शाख्तार डोनेट्स्कसँगको आफ्नो युवावस्थालाई त्याग्यो।
ओलेक्सेंडर जिन्चिनो Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
भूतपूर्व वरिष्ठ क्यारियर सुरु गर्न ठूलो क्लबमा सर्नको लागि उसको खोजीमा उसलाई सताउन पछि आयो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… 16 वर्षको उमेरमा, ओलेक्सान्डरको शख्तरको अनुबन्धका मुद्दाहरूले उनलाई रुबिन काजानसँग हस्ताक्षर गर्नबाट रोके। यो अर्को समस्या हो जुन उसलाई पूरै 18 महिना खेल्नबाट रोक्छ। यसले सबै चीजहरू हल गर्न यो समयको मात्रा लिए। यस अन्त्यमा, ओलेक्सान्डर उफा, रूसी फुटबल क्लब क्लब उफामा सम्मिलित भयो, जुन उनका आमा बुबा बस्नुहुन्थ्यो। क्लबले ओलेक्सान्डरलाई रसियन प्रिमियर लिगमा खेल्ने अवसर दियो।
केवल चाहिएको हुनु भनेको युवा युक्रेनियनकालागि एक आत्मविश्वास बढाउनु हो जसले नयाँ संस्कृति, प्रशिक्षण विधि र बानीमा पर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस गरे। ओलेक्सान्डर जिन्चेन्कोले उफामा एक उल्का वरिष्ठ क्यारियरको इज्जत बढाए किनकि उनी क्लबको सबैभन्दा लोकप्रिय प्रतिभा भए।
रसियामा ओलेक्सान्डर जिन्चेन्कोको उदय। 90Min लाई क्रेडिट
उसको प्रदर्शनले शीर्ष यूरोपीयन क्लबहरू आकर्षण गर्‍यो जसमध्ये मान सिटी।4जुलाई 2016 मा, जिन्चेन्को प्रिमियर लिग क्लब मन्चेस्टर सिटी को लागी अज्ञात शुल्क को लागी हस्ताक्षर गरे लगभग 1.7 मिलियन को लागी।
प्रतिभाको पोखरीले भरिएको क्लबमा आइपुगेपछि, जिन्चेन्को आफूलाई पीएसभी आइन्डहोभनमा पठाउन सहमत भए, जसले उनलाई पश्चिमी यूरोपमा जीवन अनुकूल गर्न मद्दत गर्‍यो। उनको शहर मा फर्केर पहिलो चोटि जंग लाग्यो, तर पछि भाग्य को एक स्ट्रोक संग आए जब चोट लाग्यो बेंजामिन मिन्डी बायाँ-पछाडि दावी दावी गर्न उसलाई एक मौका दियो। लेख्ने समयमा, 2018 / 2019 सिजनमा जिन्चेन्कोले आफ्नो टिमलाई जित्नमा उनको टीमलाई मद्दत गर्‍यो।
ओलेक्सान्डर जिन्चेन्को फेम कथामा उठ्न
यद्यपि उनी एन्ड्री शेवचेन्को नहोलान् तर उनले चाहेका थिए Oleksandr Zinchenko छ संसारलाई प्रमाणित गर्नुहोस् कि उहाँ आफ्नो युक्रेनियन फुटबल पीढीको अर्को सुन्दर प्रतिज्ञाहरू हुनुहुन्छ। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
ओलेक्सेंडर जिन्चिनो Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
म्यान सिटीको लागि उनको प्रसिद्धी र ट्रेबलको जीत संग, यो निश्चित छ कि धेरै प्रशंसकहरूले ज्वलन्त प्रश्न सोधे होलान्; ओलेक्सान्डर जिन्चेन्को प्रेमिका वा पत्नी को हो?. त्यहाँ कुनै तथ्यलाई इन्कार गरीरहेको छैन कि उसको सुन्दर देखिन्छ आफ्नो महिला प्रशंसकहरु को लागी उनी एक प्रिय बन्न सक्दैन। यद्यपि सफल फुटबलरको पछाडि एक ग्लैमरस प्रेमिका छ, भ्लाडा सेदानको व्यक्तित्वमा जो एक युक्रेनियन पत्रकार हुन्।
तपाईंलाई थाँहा थियो? … म्यान सिटी स्टार उनको प्रेमिकाको साथ प्रेममा परिणत भयो जब उनी उनीसँग उनको ग्राहकको रूपमा ड्युटीमा थिए। उनी सुन्दर देखिन्छिन्, ओलेक्सान्डर जिन्चेन्को मात्र लोभ्याइनन्, तर उनको प्रत्यक्ष प्रेमको अन्तर्वार्तामा उनको चुम्बन गर्न सक्ने प्रेममा डुब्यो।
ओलेक्सान्डर जिन्चेन्को सम्बन्ध जीवन- क्रेडिट सूर्य
यो अन्तर्वार्ता तब भयो जब यूक्रेनी अन्तर्राष्ट्रिय मात्र यूरो एक्सएनयूएमएक्स क्वालिफायरमा सर्बियालाई हराएर मैदानबाट बाहिर आएको थियो।
रोपेको चुम्बन पछि, प्रशंसकहरूले पछि दुबै प्रेमीहरूले डेटि begun सुरु गरेको हल्ला हल्ला पुष्टि गरे। त्यो सुन्दर क्षणदेखि नै, दुबै प्रेमीहरूले एक अर्कालाई नशामा डुबाएका थिए उनीहरूको सोशल मिडिया खाताहरूबाट लिइएको थुप्रै शटहरूमा देखाइएको रूपमा।
ओलेक्सान्डर जिन्चेन्को र भ्लाडा सेडान
निस्सन्देह, ओलेक्सान्डर र भ्लाडा युक्रेनी फुटबल विश्वको सबैभन्दा स्थापित जोडी बनेका छन्। गर्मी को लागी एक जोडी को मनपर्ने getaways को एक ओम्पल्यान्ड, FL 32819, संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्थित सिम्प्सन सवारी हो।
ओलेक्सान्डर जिन्चेन्को भ्लाडा सेडानको साथ प्रेम कहानी
तथ्य यो हो कि दुबै प्रेमीहरू उनीहरूको रोमान्समा ढिलो छैन जस्तो देखिन्छ कि विवाह वा विवाह अर्को औपचारिक चरण हुन सक्छ भन्ने कुरामा कुनै श .्का छैन।
ओलेक्सेंडर जिन्चिनो Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
के ले Oleksandr Zinchenko टिक बनाउँछ? फुटबल पिचबाट टाढाको उसको व्यक्तिगत जीवनलाई चिन्नुले तपाईंलाई उसको पूरा तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
सुरूवात गर्दै, ऊ कडा चरित्र र व्यक्तित्वले बनेको एक फुटबलर हो जुन बनेको छ “एक प्रतिशत प्रतिभा, 99 प्रतिशत कडा परिश्रम"। ओलेक्सान्डर एक धनु राशिका जन्मजात हुन् र उनी हाँस्न र जीवनको विविधताबाट आनन्द लिन चाहान्छन् जुन तलको चित्रमा देखाइएको छ।
ओलेक्सान्डर जिन्चेन्को व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरू
यो अफ पिच व्यक्तित्व पिचमा आफ्नो व्यवसाय गर्दा उसले ब्यक्त गर्ने व्यक्ति भन्दा बिलकुलै फरक छ।
ओलेक्सेंडर जिन्चिनो Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
तलको फोटोको आधारमा, तपाईं सजिलैसँग यो निष्कर्षमा पुग्न सक्नुहुन्छ कि ओलेक्सान्डर जिचेन्कोका आमाबुवा इरिना र भिक्टरले हाल आफ्नो प्यारा छोराबाट पाउने फाइदाहरू र आशिष्‌हरू कटनी गरिरहेका छन्।
ओलेक्सान्डर जिन्चेन्को अभिभावक
के देखिन्छ, ओलेक्सान्डर आमा बुबालाई बेलुकीको भोजमा लैजान माया गर्छन्। उसको आफ्नो बुबा र आमा आरामदायी छ भन्ने कुराको सुनिश्चिततामा उसले पिचमा राख्ने प्रतिबद्धतासँग मिल्दोजुल्दो छ।
ओलेक्सान्डर जिन्चेन्को आफ्ना अभिभावकलाई बाहिर निकाल्छन्
ओलेक्सान्डर आफ्नो बुवासँग नभई आफ्नो आमाको धेरै नजिक देखिन्छ। ऊसँग उसको आमासँग नजिकको समानता छ, उसको बुबा जस्तो छैन जुन तपाईं फोटोबाट सजिलै भन्न सक्नुहुनेछ।
ओलेक्सान्डर जिन्चेन्को र उनकी आमा इरिना
यद्यपि उसको कुनै भाइ (हरू) वा बहिनी (हरू) छन् भने थोरै मात्र थाहा छ, ओलेक्सान्डरका हजुरआमा लेखनको समय जत्तिकै जीवित छन्।
ओलेक्सान्डर जिन्चेन्को पारिवारिक जीवन
ओलेक्सेंडर जिन्चिनो Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - LifeStyle तथ्यहरू
जुलाई 4th मा, 2016 उक्रेनियनले म्यानचेस्टर सिटीसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे जुन उनलाई प्रतिवर्ष 250,000 यूरो (219,000 पाउन्ड) को पूर्ण तलबको जालमा जुटाउँछ। हामीले नम्बरहरू कम गरेका छौं, यसको मतलब त्यो प्रति दिन € 683 (£ 601) र hour 28 (N 25) प्रति घण्टा कमाउँछ। इमेजिंग तपाईलाई यो पैसा कमाईएको छ र तपाईं यसको साथ के गर्नुहुन्छ। ओलेक्सान्डरका लागि, उनी साधारण जीवन बिताउन रुचाउँछन्।
ओलेक्सान्डर जिन्चेन्को लाइफ स्टाइल तथ्यहरू। क्रेडिट WTFoot
ओलेक्सेंडर जिन्चिनो Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्य
गलत पहिचान: दुबै ओलेक्सान्डर जिन्चेन्को र केविन डी ब्रुने छ एक विशिष्ट निष्पक्ष कपाल र एकै खालका अनुहारहरू। यो दुई म्यान सिटी प्लेयर बीच एक निश्चित गलतफहमी र गलत पहिचानको प्राथमिक कारण हो। टाढाबाट, तिनीहरू जुम्ल्याहा जस्तो देखिन्छन्, तर जब हामी सँगै छौं, दुबै फरक देखिन्छन्।
ओलेक्सान्डर जिन्चेन्को र केभिन डी ब्रुने- द सम्मेलन
यसको बारेमा बोल्दै, जिन्चेन्कोले एक पटक भने; “मैले यो सँधै सुनेको छु, मलाई विश्वास गर्नुहोस्। धेरैले मलाई 'केभ' भन्छन विशेष गरी जब म टोलीको बसमा चढ्छु। फ्यानहरूले चिच्याउनेछन् 'केभ, के मसँग फोटो छ?' तर जब म फर्कें, तिनीहरू 'ओह, यो केविन होइनन् जस्ता हुनेछन्'। क्रेडिट टेलीग्राफ
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Oleksandr Zinchenko बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।